तीज र ब्रत: श्रीमानको आयू बढ्थ्यो भने हाम्रो बुवा ऐले पनि हामीसंगै हुनुपर्ने हैनर ? - Jhilko
तीज र ब्रत: श्रीमानको आयू बढ्थ्यो भने हाम्रो बुवा ऐले पनि हामीसंगै हुनुपर्ने हैनर ?
२ भदौ,२०७६ 609 0
अचेल तीजका नाममा एक महिना अघिदेखि दर खाने चलन बढ्दो छ । आफन्त मात्रै हैन, एउटै कार्यालयमा कामगर्ने साथीसंगी, टोल छिमेकका साथिहरु मिलेर पालैपालो आ—आफ्नो घरमा दर ख्वाउने संस्कार समाजमा फस्टाउदो छ । कतिपय संघसंस्था तथा सरकारी कार्यालयले महिला कर्मचारीको सम्मानका लागि भन्दै दर ख्वाउने कार्यक्रम तीज आउनुभन्दा हप्तौं अगाडीदेखि गर्न थालेका छन् ।
कुनै कुनै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुले त तीज विशेष कार्यक्रमका लागि जनताले तिरेको करबाट बजेट विनियोजन नै गरेको भन्नै समाचारहरु पढ्ने अवसर समेत प्राप्त भएको थियो ।
पर्वका नाममा महिनादिन अघिदेखि भड्किलो तडकभड भयो भन्दै बिरोधका स्वरहरु उठ्न थालेको भएतापनि पार्टि प्यालेसमा जम्मा भएर घण्टौंसम्म झुम्दै दर खाने प्रचलन रोकिएको छैन । अझ भनौ, पर्वका नाममा फुर्तिफार्ति गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालमा मात्रै हैन विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समते तीज पर्व आउनुभन्दा थुप्रै दिन अगाडीदेखि तीज विशेष कार्यक्रम गर्ने गरेको उनिहरुले फेसबुकमा पोष्ट गरेका तस्वीरबाट बुझ्न सकिन्छ ।
तीजका बारेमा मलाई यो पर्व दर खाने भन्दा बढी यससंग सम्बन्धी अन्य कथा बारे धेरै ज्ञान छैन । मलाई पछिसम्म पनि तीज भन्या बेलुका मध्यरातमा उठेर दर खाने, भोलीपल्ट थानापती (खनियाखर्कमा रहेको मन्दिरमा) गएर पुजा गर्ने, सिन्धुली गढी क्षेत्रमा रहेको टुँडिखेलको चौरमा नाँचगान गर्ने, बेलुका भात खाएपछि तीज सकियो जस्तो लाग्थो ।
तर, ऐले बुझ्दा मध्यरातमा उठेर दर खादा भोलिपल्टको निराहार ब्रतमा भोक नलागोस भनेर मध्यरातमा दर खाइएको होला जस्तो लाग्छ । तीजको ब्रत बस्दा पानी समेत नखाइ निराहार ब्रत बसि, भोलिपल्ट ऋषिपञ्चमी स्नान पश्चात पूजा गरेर मात्रै खाना खाने चलन विस्तारै बुझ्दै छु ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरुले स्वास्थ्यका लागि बेला बेलामा पेटलाई केही समय खाली राख्नु राम्रो भनिएको छ भन्दै पत्रपत्रिकाहरुले समाचार छाप्ने गरेका छन् । केही समयसम्म पेटलाई खाली राख्दा राम्रो पनि होला, तर पानी समेत नखाइ दिनभरी भोकभोकै बस्न चाहिँ सजिलो पक्कै छैन । त्यसरी भोकभोकै बस्दा श्रीमान्को दीर्घायू हैन ब्रत बस्नेको आयू चाहीँ तलमाथि नहोला भन्न सकिन्न ।
तीजको ब्रत आफ्नो लोग्नेको दिर्घायू तथा सुस्वास्थ्यका लागि हो भन्नेहरु धेरै छन् । हाम्रा कतिपय संस्कार तथा चालचलनहरु बैज्ञानिक हिसाबले कहिकतै मेल खाने खालका पनि छन्, तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई नै धरापमा पारेर पानीको थोपा समेत नखाई गरिने ब्रतप्रति मेरो विश्वास छैन ।
पानी समेत नखाई ब्रत बस्दा श्रीमानको आयू बढ्थ्यो भने हाम्रो बुवा ऐलेपनि हामीसंगै हुनुपर्ने हैन र ? किन एकाउन्न बर्षको अल्पायूमै हामीलाई छोडेर जानुभयो ? हाम्री आमाले पनि त बिहे भएको बर्षदेखि कुनै बर्ष नटुटाइ बुबाको लामो आयूको कामना गर्दै पानी समेत नखाई हरेक बर्ष तीजमा ब्रत बस्नुभयो ।
खै त ?
धेरै वर्ष पहिला पनि आमाले मंगलबारको ब्रत लिदा भगवानका नाममा बालेको दियो ढलेर खाटमा रहेको सिरानी, सिरक, राडी सबै जलेको मलाई याद छ । त्यसैले देखासेखीका लागि गरिने ब्रत भन्दा आफ्नो सुस्वास्थ्यलाई ख्यालगरी सकारात्मक विचार, खानपान, योग र कर्मप्रति ध्यान दिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ ।
विबाहित महिलाहरुका निम्ति समाजमा रहेको अन्धविश्वासका कारण तीजको निराहार ब्रत बस्नु अनिवार्य जस्तै मानिदै आएको छ । केही महिलाहरुले निराहार ब्रतलाई बेलुकीपख भंग गरी दुध, तथा फलफूलहरु खाएको पनि देखेको छु ।
तर, धेरै महिलाहरु अन्धविश्वासका कारण ऋषी पञ्चमीको पूजा नगरेसम्म भोक भोकै बस्ने गरेका छन् । शारिरिक रुपमा कमजोर रहेका महिलाहरुलाई तागतको कमि हुँदा धेरैदिनसम्म पनि आफ्नो नियमित दिनचर्यामा फर्कन सक्दैनन । शरिरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु देखिन थाल्दछन् ।
तीज पर्वको पूर्वसन्ध्यामा डाक्टरहरुले निरन्तर तीनघण्टा भन्दा बढि भोकै बस्दा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने भन्दै त्यसरी भोकै नबस्न आग्रह गरेका छन् । यति कठोर ब्रत बस्ने सन्दर्भमा हरेक महिलाले आफ्नो शरिरलाई बुझेर ब्रत कति लम्याउने वा अन्त्यगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
यस अघि कहिल्यै निराहार ब्रत नबसेकी मेरी श्रीमती बिहे भएको पहिलो बर्षको तीज मान्नका लागी माइत गएकी छिन् ।
म उनलाई भन्न चाहान्छु, तिमिले बस्ने ब्रतले मेरो आयूलाई तलमाथि पार्दैन । मेरो आयू बढ्ने र घट्ने भनेको मैले बाँचेको जिवन शैली र खानपानले निर्धारण गर्ने हो ।
अरुले कुरा काट्लान भन्ने डरले निराहार ब्रत बस्ने निर्णय गरेकी छौ भने ब्रत नबस्नु । ब्रत त आफ्नो शरिरले धानेसम्म बस्ने न हो । पानी तथा फलफूल बिना नै ब्रत बस्यौ भने एक हप्ता अगाडी निको भएको जरो बल्झिने पक्का छ । डाक्टरले तिमिलाई पहिलो औषधी नै प¥याप्त पानी खानु भनेर लेखिदिएको ख्याल गर्नु ।
श्रीमानको दिर्घायूको कामना गर्दै निराहार ब्रत बस्नेहरु सबैले सत्य के हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ । निराहार ब्रत बस्नुभन्दा अघि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर मात्रै ब्रत बस्नुहोस । श्रीमतीको निराहार ब्रतले श्रीमानको दिर्घायू हुन्छ भन्नु नितान्त भ्रम हो । श्रीमानको मात्रै हैन सिंगो परिबारको दिर्घायूको लागि श्रीमतिले भोकभोकै ब्रत बसेर हैन परिवारका सबै सदस्यहरुले स्वस्थ्य तथा असल जिवनको अभ्यास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै सबैको दिर्घायू हुन्छ । (लेखक पत्रकार हुन्)
सीधा कुरा आईजीसँग (व्यंग्य)
नेप्से सामान्य बढ्यो
१ पुष,२०७६062
नेप्से सूचक आइतबार १.१७ अंकले बढेर ११५०.८१ विन्दुमा आइपुगेको छ ।
११ हजार वैज्ञानिक भन्छन् –‘जलवायु परिवर्तन स्पस्ट र सुबोध...
३ कार्तिक,२०७६0193
विश्वका ११ हजार वैज्ञानिकहरूले विश्व जलवायु परिवर्तनको आकस्मिक संकटको अगाडि रहेको...
मृतक परिवार पुगेको धेरैपछि मात्र प्रमुख अतिथि
५ फाल्गुन,२०७५0706
नेकपाले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि निर्धारित...
आजबाट ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाता सबै नेपालीको बैंक खाता’ अभियान...
१ बैशाख,२०७६0313
सरकारले नयाँ वर्ष पहिलो दिन नै देशैभर ‘खोलौँ बैंक खाता’ अभियान शुरु गरेको हो । ‘समृद्धिसँग...